N'ogbe 6x12m Clear PVC Film Party Tent Ihe Nkiri Greenhouse Tent na Greenhouse | Winsom
Ụlọ ntu otu
Okpokoro tebụl & oche
Chebe ụgbọ ala
Ahịhịa achara maka Sukkah
Ihe mkpuchi oge niile ...
Cheap Pee Film Ọwara Greenh ...
Nnukwu ọnụ ahịa osisi ekeresimesi S ...
6x12m Clear PVC Film Party Tent Ihe Nkiri Greenhouse
6-19 Ibe Ibe 20-49
> = Ibe 50
Ụlọ oriri na ọ partyụ Thisụ a bụ ụlọ ntu ọtụtụ ihe. Ọ dị mma maka mmemme ọ bụla n'èzí, dị ka ihe ngosi, agbamakwụkwọ, oriri. Ị nwekwara ike ịwụnye ya n'azụ ụlọ gị dị ka nnukwu anwụ anwụ mara mma iji mee ezinụlọ gị na ndị ọbịa obi ụtọ. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya dị ka griin haus. Ọ dabere na gị.
1) Galvanized ígwè etiti, nchara & corrosion na -eguzogide.
2) Mkpọchi opupu mmiri na nkwonkwo maka ịtọlite ​​na ịdata ala
3) Ngosipụta dị elu dị elu na ihe nkiri PVC na -eguzogide UV.
Ihe nkiri PVC 0.3mm
Akụkụ akụkụ akụkụ
Dia 42*1.2/38*1.0mm ọkpọ galvanized ígwè
Ịkwakọ ngwaahịa katọn
Ike katọn mbukota
Ihe osise ọkọlọtọ 20x40ft (6x12m)
Ezigbo maka ihe omume dị n'èzí, ọkachasị dabara maka isoro ndị enyi gị kerịta tii ehihie. Ihe nkiri pvc na -eguzogide mmiri na UV na ihe nchara siri ike na -eme ka ọ bụrụ nkasi obi na nchekwa karịa. Ọzọkwa, we nwere ike iji ya dị ka griin haus iji kụọ okooko osisi, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi .I nwere ike too ihe ọ bụla masịrị gị. Ụlọ ntu ihe nkiri a nwere ike hụ na echebere osisi gị niile site na ọnọdụ ihu igwe siri ike dịka mmiri ozuzo, ikuku na snow.
Ogo nke ihe maka ụlọ ihe nkiri ihe nkiri a na-egosi bụ ọkwa dị elu. 38*1.0mm galvanized ọkpọkọ a kwusiri ike, na njikọta ụzọ 3 na njikọ ụzọ 4 bụ 42*1.2mm usoro ihe nchara siri ike, iji hụ na nkwụsi ike dị elu na nguzogide ikuku nke ụlọikwuu ahụ dum.
Maka ihe nkiri PVC, ọkpụrụkpụ ya bụ wires 30. Ihe nkiri pvc na -apụta ìhè, yabụ mgbe ị na -eso ndị enyi gị gaa oriri tii ma ọ bụ oriri n'ehihie, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịnụ ụtọ oge obi ụtọ, ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ihe nkiri ahụ n'èzí na A na -ewepụ mbadamba niile nke ụlọikwuu ahụ. Enwere ike itinye ya ngwa ngwa site na eriri velcro ọcha na bọọlụ bungee.
Enwere ike ibugharị akụkụ ya na ọnụ ụzọ ya n'ụzọ dị mfe. Enwere bọọlụ na -awụlikwa elu na njikọta maka ịgbakwunye nkwụsi ike nke etiti ahụ, bọọlụ bungee ọcha na -agbakwunye elu ya na akụkụ ya n'akụkụ.
Ọdịdị dị elu, usoro nchara galvanized dị arọ.Rust & corrosion frame frame. Ọdịdị triangle pụrụ iche, na -eme ka elu ụlọ elu ya kwụsie ike ma sie ike.
A na -eji eriri ụkwụ nke ọ bụla nwee nnukwu ụkwụ ụkwụ, nke nwere ike ịkwalite nkwụsi ike nke ụlọ ntu ahụ .Ọzọkwa, ọkpọ ụkwụ ọ bụla nwere ihe nkiri ụkwụ, nke nwere ike inye nchedo nke ọkpọ ahụ nke ọma .Anyị na -eji eriri na -agbanwe agbanwe iji jikọọ ihe nkiri tube ụkwụ na kposara na ọkpọ ụkwụ iji mee ka fim ahụ dabara na tube ahụ nke ọma.
Nke gara aga: Ụlọikwuu multifunctional PVC Ihe Nlereanya Ụlọ Mmanya Tent 3x6m
Osote: Nnukwu ụlọ igwe na -agba ọkụkọ na -eje ije na ogige mkpuchi oke bekee anụ ụlọ ọkụkọ 6x3x2m
Ụlọ Mgbakọ Mmefu Ego
Ụlọikwuu otu ọnụ ala
Ụlọikwuu Party n'èzí
Ụlọikwuu oriri agbamakwụkwọ
Biko nye ndụmọdụ nha na ole ịchọrọ, yana ọdụ ụgbọ mmiri dị na obodo gị nke dị gị nso, mgbe ahụ aga m eme ọnụahịa CIF gọọmentị maka ntụnye aka gị.
10x20Ft (3x6M) nnukwu ụlọikwuu otu pati PVC
Nnukwu ụlọikwuu dị n'èzí maka ihe omume agbamakwụkwọ 5x8m
Ogige PVC nke dị n'èzí 4x4m
Mmefu ego 5x10m ụlọ ezumike otu mmemme PE
Ụlọikwuu Maka Ihe Omume N'èzí N'ogbe 6x12m
Ụlọikwuu Nnọọ ọnụ ahịa ire ere 13x20ft (4x6m)
6x12m Nnukwu ọrụ PVC Wedding Party tent na Fi ...
3 × 3 Ụlọikwuu Omume dị ọnụ ala
NDỤMỌDỤ n'efu 0086-15358204830
ADDRES No.1 Tianyuan Rd, Mpaghara Mmepụta Machinery, Dongtai City, Jiangsu Province, PRChina